Ku Saabsan Dhamaan Dukaamada
APICMO waa cidda bixisa qalabka daaweynta qandaraaska iyo heshiis R & D
Qalabaynta gaarka ah iyo heshiiska R & D
Waxyaabaha yar yar iyo wax soo saarka ballaadhan
Qalabaynta dhismaha daroogada
Hannaanka R & D iyo horumarinta jidka cusub
APICMO waa bixiyaha daawo-bixinta Qodobbada qaaska ah iyo heshiiska R & D.
APICMO waa shirkad daawo oo ku takhasusay isdhexgalka muhiimka ah ee cilmi-baaris cusub iyo horumarinta kansarka, horumarinta nidaamka, habaynta isku dhafka, wax soo saarka guud iyo adeegyo kale oo loogu talagalay cilmi baarista iyo horumarinta daroogada iyo shirkadaha dawooyinka; APICMO ee kiimikada, kiimikada, kiimikada kiimikada, kiimikada, bayoolajiyada, iyo kuwa ganaaxa Kobcinta kiimikada, xakamaynta tayada, waxsoosaarka cGMP, maareynta mashruuca, iyo suuqgeyntu waxay leeyihiin faa'iido aad u xoogan.
APICMO waxay leedahay koox xoogan R & D iyo saynisyahano khibrad leh - Dr. Zeng Zhaosen. Waxaan leenahay warshad wax soo saarkeedu weyn iyo ganacsiga horumarinta ganacsiga. Xubnaha APICMO ee xubnaha kooxda badanaa waxay ka yimaadeen wadamada horumaray sida Maraykanka, Yurub iyo Japan. In ka badan sannadka 10 waayo-aragnimada warshadaha ee shirkadaha dawooyinka badan leh. Kadib in ka badan toban sano oo ah isku-dhafka suuqyada, APICMO waxay leedahay saldhig ballaaran oo iskaashiga ah ee warshadaha dhexdhexaadinta daawooyinka.
APICMO waxay muhiimad weyn u leedahay oo ilaalisa hantida garaadka ee macaamiisheeda. Marka laga soo tago APICMO waa habka difaaca hanti maguursan oo awood badan, APICMO waxay samaysay diiwaan wanaagsan oo lagu daboolayo baahida macaamiisha qaranka ee ICH. Saldhigga macaamiisha ee APICMO waxay ka kooban tahay shirkado yaryar oo ku takhasusay daawooyinka khaaska ah ee daawooyinka caalamiga ah, oo ka socda machadyada cilmi-baarista adduunka iyo kuwa horumarinta, shaybaarrada cilmi-baarista, ICH oo ka soo jeeda waddamada horumaray sida China iyo India. Mashruucyada APICMO iyo qaybaha wax soo saarka ayaa laga baaraandegay ka hor daaweynta kahor ilaa dalab ganacsi.
"APICMO waa ISO 9001: 2008 shahaadada oo dhan iyo hawlaha ganacsiga oo dhan ayaa si adag u waafaqsan heerarka maareynta tayada caalamiga ah."
bixinta nidaamka, habaynta isku dhejinta, soosaarka ballaaran iyo adeegyada kale ee cilmi baarista iyo horumarinta daroogada iyo shirkadaha daawooyinka.
Xubnaha APICMO ee xubnaha kooxda badanaa waxay ka yimaadeen wadamada horumaray sida Maraykanka, Yurub iyo Japan.
WAXYAABAHA KU DHASHAY
APICMO waxa kale oo ay bixisaa habka ansaxinta, daraasaadka tayada, barashada naafanimada iyo daraasaadka xasiloonida si ay ula kulmaan shuruuda IND iyo NDA.
APICMO waxay dooneysaa in ay hagaajiso geedi socodka ayna yareyso kharashyada macaamiisheena. Waxaanu samaynay shabakad aad u fiican oo lagu kalsoon yahay oo ah shirkadaha Shiineeyska ah ee Shiinaha si ay u bixiyaan adeegyo wax-soo saar iyo wax-soo-saarka wax-soo-saarka.
Waxqabadka habka difaaca jirka
APICMO waa abaalmarin abaalmarin ah API, shirkadda CMO.
AIMS BY LABORATORYARADA
Ciladda iyo qiimeynta waxqabadka antitumor ee waraaqaha sulfuric acid steroidal sodium iyo xeryaha oxime leh waxqabadka antitumor.
WAXYAABAHA LOOGU TALAGALAY YIRIIN
5 Labo-shaybaadh oo isku xira jaamacadaha caanka ah ee 5 ee Shiinaha. Jaamacadda Sichuan, Jaamacadda Badda ee Shiinaha, Jaamacadda Changzhou, Jaamacadda Hunan ee Sayniska iyo Tiknoolajiyada, Machadka Kimistaan, Akademiyada Shiinaha ee Ganacsiga (ICCAS)
Miisaaniyadda la bixiyo: laga bilaabo kiilogaraamyada boqolaal kilograms.we ayaa leh koox ka kooban xubnaha 10 maareynta cilmi-baarista suuqa guud ee qaybaha wax soo saarka ee kala duwan iyo sidoo kale baaritaan lagu sameeyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha, waxyaabooyinka sheyga, iwm
APICMO waxay ka buuxsameysaa xirfado xariif ah oo la taaban karo
kuwaas oo wax badan ka qabanaya sidii loo sameyn lahaa.
Agaasimaha & FOUNDER
Aasaasaha, hoggaanka hogaanka maamulka shirkadda; PhD ayaa ka heshay Jaamacadda Fudan oo ku taal kiimiko dabiici ah. In ka badan sagaal sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan beerta dabiiciga ah ee kiimikada daawada. Khibrad qani ah oo ku jirta kiimikada combinatorial, kimistarika daawada iyo qalabixinta maareynta iyo maareynta mashruuca.
Aasaasaha, hoggaanka hogaanka maamulka shirkadda; PhD ayaa ka heshay Jaamacadda Fudan oo ku taal kiimiko dabiici ah. In ka badan sagaal sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan kiimikada dabiiciga ah iyo naqshadeynta naqshadeynta mukhadaraadka ku dhawaad ​​waraaqaha cilmi baarista ee 10 ee lagu daabacay joornaalada rasmiga ah, oo leh in ka badan shan shandadood oo shiinaale ah.
Suuq geynta iyo xayaysiinta
ka Department of chemistry organic, Jaamacadda Stanford, Jaamacadda Stanford, Waaxda chemistry iyo kimistari, in ka badan 15 sano oo khibrad ah oo duurka ku ah Avv organic kiimikada qalin, ayaa u adeegi jireen Pfizer Inc ah, mas'uul ka ah qaabka suuq ee suuqyada caalamiga ah waxaana uu sameeyay guulo cajiib ah.
Wax ka badan 10 khibrad shaqo ee beerta kiimikada kiimikada ah ee kiimikada ah, ayaa ka shaqeysay GSK, oo ka masuul ah iibinta Waqooyiga Ameerika, waxay gaartay natiijooyin cajiib ah.
APICMO - Ganacsiga, APICMO & Pharmaceutical
APICMO waa shirkad daawo oo soo saarta qaybaha muhiimka ah ee daawooyinka cusub. Waxay diiradda saareysaa bixinta nidaam dhammaystiran oo adeegyo udub dhexaad ah iyo adeegyo khaas ah oo loogu talagalay cilmi baarista daroogada iyo hay'adaha horumarinta iyo shirkadaha daawooyinka.
Is-dhexaadinta la isku habeeyey iyo R & D qandaraas
Nidaam yar-yar & amar qadar leh
Dhismaha D, 2 dabaqa, No. 128, Xiangyin Road, Degmada Yangpu, 200433, Shanghai, Shiinaha
© 2019 APICMO. All Right Reserved.